Xiaomi Mi Band 2, ihe eji ejiji Xiaomi nke ka di nma, mara mma ma di onu ala | Akụkọ akụrụngwa
La Xiaomi Mi Band Ka oge na-aga, ọ ghọrọ otu n'ime ngwaọrụ kachasị mma na-ere n'ụwa niile, n'ihi ịdị mfe ya, nhọrọ ya na arụmọrụ ya, ma karịa ihe niile n'ihi ọnụahịa ya. Ugbu a, Xiaomi kpebiri ịlaghachi n'ibu ahụ na izu ole na ole gara aga Xiaomi My Band 2, na obere OLED ihuenyo dị ka ihe ọhụrụ na taa na anyị ga-enyocha n'ụzọ zuru ezu mgbe anyị nyochachara ya ruo oge ụfọdụ.
A na-egosipụta Mi Band 2 a n'ụzọ yiri nke ọma na nsụgharị mbụ nke ọma, na-edebe atụmatụ ya kpamkpam, ọ bụ ezie na dị ka anyị kwurula na-etinye ihuenyo nke anyị nwere ike ịhụ ọtụtụ ozi, nke na Mi Band na Mi Band 1S anyị enweghị ike ịhụ ma ọ bụrụ na anyị abanye na ihuenyo nke ngwaọrụ mkpanaka anyị. Ekwesịrị m ịsị na n'echiche m na ihuenyo adịghị mkpa, ọ bụ ezie na enweghị ngafe n'ọnọdụ ọ bụla, yana ọ doro anya na ọ dị mkpa ịnye ihe ọhụụ nye ọtụtụ ndị ọrụ nwere ụdị mbụ nke wearable sitere n'aka ndị nrụpụta China.
3 Batrị; Nzọụkwụ doro anya, nke ahụ ziri ezi
Site na atụmatụ nke Xiaomi Mi Band 2 anyị nwere ike ịsị na enwere mgbanwe ole na ole ma e jiri ya tụnyere ụdị nke mbụ nke ngwaọrụ sitere n'aka ndị na-emepụta China, yana ịdị mfe bụ okwu nkọwa nke kachasị mma. Ma ọ bụ na anyị anaghị anọgide na-achọta na mgbaaka ejiri rọba na-agbanwe agbanwe, nke anyị ga-etinye ugbu a ntakịrị ihe mmetụta, n'ihi ihuenyo OLED anyị ekwuola.
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na Mi Band 2 a toro na nha, ọ ka nwere nkasi obi iji eyi na nkwojiaka, na-echefu ya kpamkpam awa ole na ole mgbe etinyechara ya. Nke a nwere ike iyi ka ọ bụ nke abụọ, mana na-eche na anyị na-arụ ọrụ na ngwaọrụ nke anyị ga-eyi ụbọchị niile, ọ bụ nkọwa zuru oke nke na-agaghị ahụ nke ọma.
N'ihe banyere mgbochi mmiri, ngwaọrụ a nwere Asambodo IP67, nke anyị nwere ike ịmị ya ma mikpuo ya na-enweghị nsogbu ọ bụla maka ọkara elekere ma ruo otu mita miri emi. N'ime ule dị iche iche anyị mere, anyị rịọrọ ọtụtụ ihe n'aka nke a Xiaomi Mi Band 2 ma anyị nwere ike ịgwa gị na ọ gafere ha na-enweghị nsogbu ọ bụla yana n'ụzọ pụtara ìhè.
Ihe ọhụrụ nke Xiaomi Mi Band 2 a bụ dịka anyị kwurula na ihe karịrị otu oge bụ ihuenyo OLED, nke dị ka mmalite evolushọn, mgbe onye nrụpụta China wepụtara ihe mmetụta obi na Mi Band 1S.
Ihuenyo a nwere oke zuru oke, nke na-adọta uche na mbụ, mana ka oge na-aga site na-eyi ya na nkwojiaka anyị na-amalite ịghọta adịghị ike na adịghị ike ọ nwere.
Ma nke ahụ bụ poderla gụrụ naanị ekwesị, bụ mgbe a nnukwu mwepu. Tụkwasị na nke ahụ, enweghị ike ịhazi ike ya na-eweta nsogbu, ọ bụghị n'ime ụlọ ebe ọ dị ka ọ zuru oke, mana n'èzí ebe mgbe ụfọdụ ọ ga-adị mma ịnye ya ntakịrị ihie iji hụ ya n'enweghị nsogbu ọ bụla.
N'ikpeazụ, anyị ga-ekwu maka ịgbanwuo akpaaka na ihuenyo, ọ bụrụ na-ịchọrọ, mgbe anyị tụgharịrị nkwojiaka, nke na-arụ ọrụ nke ọma. N'ezie, ọ bụ ihe na-adịghị mma na, dịka ọmụmaatụ n'ihe ndina, ngwaọrụ ahụ na-achọpụta ntụgharị ma gbanye na-egosi ìhè na-adịghị mma, nke ezughị n'èzí mana obi abụọ adịghị ya na ọ karịrị oke na ebe gbara ọchịchịrị.
Na ihe m kwenyere na ha ziri ezi na Xiaomi bụ na ịghara ime obere OLED ihuenyo mmetụ na bọtịnụ aka nke ejiri Xiaomi Mi Band 2 rụọ ọrụ zuru oke na ihuenyo mmetụ ga-ebute nsogbu ndị ọzọ.
Batrị; Nzọụkwụ doro anya, nke ahụ ziri ezi
Batrị nke mbụ Xiaomi Mi Band, yana Mi Band 1S bụ otu n'ime ike nke ngwaọrụ a na nke ahụ bụ na ha nyere anyị nnwere onwe nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị 30. Nke a mere ka anyị chefuo ihe niile nke gadget na-eji ya ụbọchị na ụbọchị na-enweghị nsogbu. O di nwute ọdịdị nke ihuenyo na Xiaomi Mi Band 2 ewetawo uru ndị na-adọrọ mmasị, ọ bụ ezie na ọ dịkwa ndụ batrị ka mma.
N'ezie, ọ bụ ezie na ịchịisi obodo nke Mi Band a belatara ma e jiri ya tụnyere nsụgharị ndị ahụ na-enweghị ihuenyo, ọ ka dị mma nke ukwuu ma ga-enye anyị ohere iji mgbaaka quantifying maka ụbọchị 10 na-aga n'ihu. N'ime ule anyị, na njikọta mgbe niile, ịnata ọkwa na ịjụ data gbasara ahụ ike n'ọtụtụ oge, anyị enweela ike iji ya ụbọchị 9-10 na-enweghị nsogbu ọ bụla.
Nnwere onwe a bụ ọkara nke ihe Xiaomi kwere anyị nkwa na ụbọchị ngosipụta nke ọrụ a, mana n'ezie site na mbenata usoro ihe ọkụkụ, deactivating akpaghị aka ma ọ bụ iji ọnọdụ ụra anyị nwere ike ịgbatị batrị nke Mi Band 22 a onu ogugu ndi China nyere.
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na Xiaomi Mi Band 2 ọhụrụ a nwere ihuenyo, ebe anyị nwere ike ịhụ data niile metụtara ọrụ ahụ ọ na-achịkọta, anyị nwere ike ịgagharị na ngwa nke aka ya, akpọrọ Mi Fit, maka ọtụtụ nhọrọ na ọrụ ... Ngwa a na - aga n'ihu na - agbanwe obere obere, agbanyeghị na isi okwu ya dị mfe mgbe eji ya.
Onye ọrụ ọ bụla chọrọ iji ngwaọrụ Xiaomi wearable ga-agarịrị ngwa a ma ọ dị mkpa ịhazi ya wee bido iji ya. Anyị akụzighị gị ugbu a, mana akụrụngwa a sitere na ndị nrụpụta China nwere ike iji ya na ngwaọrụ nwere sistemụ arụmọrụ gam akporo yana ngwaọrụ nwere iOS.
Ngwa Mi Fit abanyela n'okirikiri na ọdịdị ihuenyo na Mi Band 2 a, mana ọ ka na-aga n'ihu na-arụ ọrụ mgbe ị na-eji ngwaọrụ a. N'okwu m, na mgbakwunye na iji ya iji hazie ya, m na-eji ya kwa ụbọchị iji gụọ data mmega ahụ niile n'ụzọ dị mma na nke zuru ezu.
Obuola ihe amara na Xiaomi adighi ere ahia ya na Europe n'uzo ndi isi ma anyi aghazuta ha n'aka China, site n'otu n'ime otutu ulo ahia ndi na ere ha ma ziga ha n'uwa nile, ma obu site na nke ato nnọkọ. Na Spain, a na-arara ọtụtụ ụlọ ahịa maka ire ngwaọrụ nke ndị na-ewu ewu na China, na-ahụ na anyị nata ha n'ime ụbọchị ole na ole, n'agbanyeghị ee, na-akwụ obere karịa ego mbụ.
N'okwu m, Xiaomi Mi Band 2 a na-efu m euro 47 site na ụlọ ahịa ebe ha na-ere ụdị ngwaọrụ Xiaomi niile.. Ọnụahịa ahụ nwere ike ịdị iche nke ukwuu, ma ọ bụrụ na anyị azụta ya site na ụlọ ahịa ndị China anyị nwere ike ịkwụ ụgwọ ọbụlagodi euro 30, mana ozugbo anyị zụrụ ya na Spain site na ụlọ ahịa ọnụahịa na-ada, ọ bụ ezie na nke ahụ bụ, nchekwa nke nnata na ọnọdụ zuru oke ma na ụbọchị ole na ole ọ na-enyocha.
Ogologo oge na nkwojiaka m ejiri Xiaomi Mi Band, ma na nke mbụ na nke kachasị mma nke onye nrụpụta China wepụtara na ihe mmetụta obi. Nkasi obi ya, nkenke ya mgbe ọ na-edekọ data na karịa nnukwu nnwere onwe ya bụ igodo nke mere na n'agbanyeghị na ọ na-eyi smartwatch, ọ ga-aga n'ihu iji mgbaaka a na-agbakọ. Mgbe Xiaomi malitere ụdị nke abụọ a nke ejiji ya, egbughị m oge maka ịzụta ya wee bido iji ya.
Have nwee ike gụọ echiche m na ederede ahụ niile, mana Na nchịkọta, anyị nwere ike ịsị na anyị na-eche ihu maka ngwaọrụ dị mma maka ọnụahịa ya, ọ bụ ezie na ọ nwere ụdị omume ọma ya na ụfọdụ ntụpọ ya.. Banyere isi ihe ọhụụ nke Xiaomi Mi Band 2 a, nke bụ ihuenyo, ị gaghị ekwupụta ihe ọjọọ ọ bụla, mana m gara n'ihu na-ekwusi ike na ọ dịghị mkpa maka ọtụtụ ndị ọrụ. N'ezie, onye ọrụ ọ bụla nke nwere ihuenyo ma ọ bụ na-adịghị echebara obere echiche nwere ike ịzụta Xiaomi Mi Band ma ọ bụ Mi Band 1S ka na-ere ahịa n'ahịa.
Xiaomi Mi Band 2 a abụrụla onye m na-enweghị ike ịhapụ m ụbọchị, ọ bụ ezie na ọ dị nwute ugbu a, m ga-echegbu onwe m ntakịrị banyere ya ebe ọ bụ na nnwere onwe ya pere mpe ma ọ dịkwa mgbe niile, na-enwu gbaa n'ọchịchịrị nke na-eme ka m cheta nke m na-eyi.
N'ebe a, anyị na-egosi gị akụkụ ọma na nke adịghị mma nke Xiaomi Mi Band 2 a mgbe ule dị iche iche anyị mechara;
Ihuenyo enweghị ohere ịchịkwa ihie
Mbelata nnwere onwe tụnyere nke izizi
Kedu ihe ị chere banyere nke a Xiaomi Mi Band 2?. Gwa anyị uche gị na oghere edebere maka nkọwa na post a ma ọ bụ site na otu netwọkụ mmekọrịta anyị nọ na ya wee gwa anyị ma ị zụtala ya ma ọ bụ na ị na-eche inweta ya n'ọdịnihu dị nso.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » Xiaomi Mi Band 2, ihe eji ejiji Xiaomi nke ka dikwa nma, di nma ma di onu ala
Anọ m ya izu 3 ma m hụrụ ya n'anya. Banyere batrị, m na-eme nke ọma ma ọ na-anọ karịa ụbọchị 20, nke m nwetara site na ịgbanyụ ọkụ na-akpaghị aka na ntụgharị nke nkwojiaka. M tinye 2 buts: nke mbụ bụ mmụba nke akuku nke anaghị enwe ike ịme ya mgbe nkwojiaka gị na-agba ọsụsọ na nke abụọ na enweghị ike ịlele ya mgbe niile dị ka ihe nyocha nke obi. Ngwa maka iOS dị n'asụsụ Bekee.
N'ikwekọ na okwu Rafael, enwere m ya kemgbe ụbọchị ole na ole mgbe emechara ya na ugbu a na-enweghị nsogbu
Obi dị m ụtọ na m ebubo ya 15 ụbọchị gara aga na Slavic na 60% batrị, na ọ bụrụ na m kwụsịrị njikọta akpaka, ma rụọ ọrụ ọkwa niile m nwere 7 na mkpokọta ma na-akpọkarị ọtụtụ, ọ dị oke mma na mgbe ụfọdụ m jiri usoro na cardio, dị ogologo ma ogologo batrị, ana m akwado ya.